इंग्ल्याण्डलाई पेनाल्टी सुटआउटमा हराउँदै इटलीले ५३ वर्षपछि जित्यो युरोकपको उपाधि - KhabarBarsha
साइन इन सामेल
स्वागत छ!एक खाताको लागि दर्ता
स्वागत छ! खाताको लागि दर्ता गर्नुहोस्
सबैप्रदेश १प्रदेश २प्रदेश ३प्रदेश ४प्रदेश ५प्रदेश ६प्रदेश ७
नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखहरूले लिए पद तथा गोपनीयताको सपथ
विजय शाहीको मृत्युको खबर झुट प्रहरीले खोज्दा कालिकोटमा भेटिए
पूर्वाधार विकास र सेवाप्रवाहमा उत्कृष्ट बन्दै त्रिशुली अस्पताल ५७औं वर्षमा
ललितपुर महानगरपालिका का रञ्जित डाक्टरको प्रमाणपत्र कीर्ते गरेको आरोपमा पक्राउ
तटस्थ बसेका रेशम चौधरी जसपाको पक्षमा खुले :गर्लान त पार्टि प्रबेस…
मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाउने जिम्मा शीर्ष नेतालाई
एमालेको माधव नेपाल पक्षले आफूहरु सरकारमा नजाने बतायो
भदौ १६ गते महाधिवेशन गर्नेगरी काम थाल्न देउवाको निर्देशन
सबैअटोअर्थनीतिपर्यटन`बैँक / वित्तबैंक-वित्त प्रमुखरोजगार
आज नेप्से परिसूचक हालसम्मकै उच्च, कारोबार रकम भने घट्याे
के हो त बैङ्क ह्याकिङको धम्की प्रकरण : राष्ट्र बैङ्क भन्छ,…
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २० कम्पनीको आईपीओ बिक्री खुल्ने कुनकुन कम्पनीको…
गोलभेंडा बजार लैजाने तयार गर्दै व्यवसायी
सबैआयुर्वेदकभर स्टोरीखानागृह सजावटफिटनेसफेसनयौन स्वास्थ्यसौन्दर्य
असोजभित्र खोप लगाइसक्न मन्त्री शर्माको आग्रह बजेटको कमी हुन नदिने
चितवन मेडिकल कलेजमा मुटुको सर्जरी पुनः शुरु
यी ६ फूलको महत्व थाहा छ ? लुकेको छ स्वास्थ्यको…
गौरिकाले राखिन् ओलम्पिकमा राष्ट्रिय कीर्तिमान
ए डिभिजन लिग तोकिएकै समयमा हुन्छ: एन्फा
सन्दीपले द हन्ड्रेड नखेल्ने
ओलम्पिकमा कोरोना फैलिनबाट रोक्न ल्याइयो ‘प्ले बुक’, नियम उल्लंघन गरे कारवाही
इंग्ल्याण्डलाई पेनाल्टी सुटआउटमा हराउँदै इटलीले ५३ वर्षपछि जित्यो युरोकपको उपाधि
६० प्रतिशतभन्दा बढी एन्ड्रोइड एपमा सुरक्षा कमजोरी, गेमिङ एपमा सबैभन्दा बढी…
जेष्ठ नागरिकलाई सरकारले नै मोबाइल चलाउन सिकाउने
प्राधिकरणले तीन ठाउँमा मोबाइल र कम्प्युटर मर्मत तालिम संचालन गर्ने
कुन एपले तपाईका के-के व्यक्तिगत सूचना लिन्छन ? हेर्नुहोस् सूची
परिमार्जनसहित आयो टेलिकमको समर अफर
अफगानिस्तानमा तालिबानद्वारा ३३ सर्वसाधरणको हत्या
पोर्न भिडियोका लागि युवतीलाई यसरी फन्दामा पार्थे राज कुन्द्रा : यसो…
चीनमा भेटियो ‘मंकी वि भाइरस’ : के यो कोरोना जस्तै जोखिमपूर्ण…
चीनकी याङले जितिन् टोकियो ओलम्पिकको पहिलो स्वर्ण
अमेरिकी कोरोना खोप लगाएका २८ जनाको मृत्यु
कथा : मनसाय
संक्रमितको उपचारका लागि स्रोतको अभाव हुन दिईँदैनः आन्तरिक मामिला मन्त्री पाण्डे
माओवादी केन्द्रद्वारा त्रिशूली अस्पताललाई अक्सिजन सहितको १० थान सिलिण्डर प्रदान
जनतासंग जोडिँदै नेपाली सेना, किस्पाङको स्वास्थ्य शिविरबाट पाँचसय बढी लाभान्वित
लिखुको छहरेमा महोत्सव र ब्यापार मेलाको तयारी अन्तिम चरणमा
घर समाचार अन्तराष्ट्रिय इंग्ल्याण्डलाई पेनाल्टी सुटआउटमा हराउँदै इटलीले ५३ वर्षपछि जित्यो युरोकपको उपाधि
२०७८, २८ असार सोमबार १३:१४
२८ असार, काठमाडौं । इंग्ल्याण्डलाई पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित गर्दै इटलीले युरोकप २०२० को उपाधि जितेको छ । सोमबार बिहान भएको फाइनलमा इटलीले इंग्ल्याण्डलाई उसैको मैदानमा पेनाल्टी सुटआउटमा ३-२ ले पराजित गरेको हो ।
सुटआउटमा इटलीका गोलकिपर जियानलुजी डोनारुम्बा नायक बन्दै दुई प्रहार बचाए । इंग्ल्याण्डका गोलकिपर जोर्डन पिकफोर्डले पनि दुई पेनाल्टी बचाएका थिए । तर नायक बन्न सकेनन् ।
लण्डनस्थित वेम्वली स्टेडियममा भएको खेलको निर्धारित र अतिरिक्त समय १-१ को बराबरीमा सकिएपछि खेलको निर्णय पेनाल्टी सुटआउट भएको हो । खेलको दोस्रो मिनेटमै इंगल्याण्डले अग्रता लिएको थियो । लुक श ले किरन ट्रिपिएरको पासमा गोल गर्दै घरेलु टोली इंग्ल्याण्डलाई अग्रता दिलाएका थिए । युरो फाइनलमा भएको यो सबैभन्दा छिटो गोल थियो भने राष्ट्रिय टिमका लागि श को पनि पहिलो गोल थियो । सम्हालिन नपाउँदै सुरुमै गोल खाएपछि इटली बराबरी गोल फर्काउनतर्फ लाग्यो ।
पहिलो हाफमा इंग्ल्याण्डले अग्रता कायमै राख्यो । तर दोस्रो हाफमा थप गोल गर्न सकेन । इटलीले भने दोस्रो हाफमा बराबरी गोल फर्कायो । ६७औं मिनेटमा लियोनार्दो बोनुचीले मार्को भेराट्टीको पासमा इटलीका लागि बराबरी गोल फर्काए ।
निर्धारित ९० मिनेटको खेल १-१ को बराबरी भएपछि ३० मिनेटको अतिरिक्त समय थपियो । अतिरिक्त समयमा थप गोल हुन नसकेपछि खेल पेनाल्टी सुटआउटमा पुग्यो ।
सुटआउटमा इटलीका लागि डोमेनिको बेरार्डी, लियोनार्दो बोनुीची र फेडेरिको बर्नाडेसी गोल गरे । इटलीका आन्द्रे बेलोट्टी र जर्जिन्होको पेनाल्टी इंग्लिस गोलकिपर पिकफोर्डले बचाए ।
इंग्ल्याण्डका ह्यारी केन र ह्यारी मग्वायरले मात्र गोल गरे ।
जाडोन सान्चो र बुकायो शाकाको बचाउ इटलीका गोलकिपर डोनारुम्बाले बचाए । मार्कुस रासफोर्डको प्रहार भने पोष्टमा लागेर फर्कियो ।
इंग्ल्याण्डका लागि अन्तिम पेनाल्टी प्रहार गरेका साकाले गोल गर्न नसकेपछि इटली विजयी भयो ।
५३ वर्षपछि पहिलो पटक युरोकप जितेको इटलीले १५ वर्षपछि ठूलो प्रतियोगिताको उपाधि जितेको हो । सन २००६ मा इटलीले विश्वकप उपाधि जितेको थियो । सन् १९६८ मा युरोकप जितेको इटलीले २००० र २०१२ मा पनि युरो फाइनल खेलेको थियो । तर उपविजेतामै सीमित भएको थियो ।
उता ५५ वर्षपछि ठूलो प्रतियोगिताको फाइनल पुगेको इंग्ल्याण्डले पहिलो पटक युरोकपको फाइनल खेलेको थियो । तर पेनाल्टी सुटआउटमा सफल हुन नसक्दा पहिलो युरो जित्ने सपना पूरा हुन सकेन ।
अघिल्लो लेखमासाताको पहिलो दिन देखियो सेयर बजारमा चमक
अर्को लेखमाप्रतिनिधिसभा विघटन बदर
Jalapa Media Services Pvt. Ltd.
फोन नम्बर: 010561111
प्रबन्ध निर्देशक/प्रधान सम्पादक:शिव प्रसाद देवकोटा
सम्पादकः कृष्णा आचार्य रोशनी
© khabarbarsha all rights reserved
६० प्रतिशतभन्दा बढी एन्ड्रोइड एपमा सुरक्षा कमजोरी, गेमिङ एपमा सबैभन्दा बढी...
शुरु भयो कक्षा ४, ७, र ९ को नयाँ पाठ्यक्रमको परीक्षण